Isixhobo sokulungisa umbane ngokuzenzekelayo
Inombolo Inombolo: BT20086-50
I-5pcs isiphatho esihlengahlengiswayo (iidigri ezingama-360) iiHwegwe
4pcs Iintonga zeentlanzi
I-3pcs intloko eguqukayo (iingcebiso ezahlukeneyo) iiHooks
38pcs ezinye iiHooks
Lungisa i-dent emzimbeni wemoto
Isixhobo sokulungisa imizimba ye-PDR isixhobo seProfessional Push Hook Rods umnyango wokulungiselela isixhobo sokungazilungisi.
Yenziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu insimbi okanye intsimbi yentsimbi, yomelele ngokwaneleyo ukuba inyuse ingqondo ngaphandle kokugoba okanye ukophula. Intsimbi yokumelana ne-corrosion yeentonga zethu zokususa i-dent ayizukurusa kwaye igcine ukuqaqamba ngalo lonke ixesha.
Esi sisixhobo sokulungisa i-dent sineentlobo ezininzi ezahlukeneyo zeentonga ezifanelekileyo kwizicelo ezininzi, nokuba yeyiphi na imoto, ifriji okanye olunye uhlengahlengiso lwengqondo, zonke zinokusetyenziswa.
2. Ngokutsho kwesicelo sakho
Ungayisebenzisa njani i-Paintless 50PCS yoKhuseleko lweKhonkco yoKhuseleko
1.Kuqala ukubona ukugqabhuka usebenzisa isibonakaliso sokukhanya. Le nkqubo iza kukunceda uchonge ulwazelelo ngentsimbi ngokuchanekileyo kwaye ukhuthaze ukulungiswa.
2. Emva koko, usebenzisa intonga yesinyithi, kuyacetyiswa ukuba ukhethe imilo yencam efanelekileyo kubantu abaninzi kwaye uhambise isifotho ngaphakathi nangaphantsi kwepaneli. Amagwegwe eemilo ezahlukeneyo kunye nobude anokukhethwa ngokobunzulu beentente ezahlukeneyo ukugqibezela umsebenzi wokulungisa.
Egqithileyo I-4PCS Intonga yeNtlanzi yePry
Okulandelayo: Ikhithi ye-36PCS Hook
Izixhobo zePdr zeMoto
Izixhobo zePdr Dent
Izixhobo zePdr Isichotho
Izixhobo zePdr Hook
Izixhobo zePdr ziyathengiswa
Ikhithi yePdr iyathengiswa
Izixhobo zePdr China
Izixhobo zePdr Glue Puller
Izixhobo zePdr iSando
Izixhobo zePdr zisetyenziswa njani
30pcs Professional Hook Push Iintonga Kit for Paint ...
Izixhobo zokufaka iRent Hook zeDent zomonakalo wesichotho
Ipeyinti engenanto yeDent Hook Kit
Iifayile ezingama-21 zePcs PDR Rod
Izixhobo zokuLungisa iiDent ezingenazintambo 3pcs ikhithi yokuloba
Iikhowudi ezingama-77 zePDR Isichotho seKhithi